Mbrɛ Ibotum Abɛyɛ Nyankopɔn Ne Nyɛnko (James 2:​23)
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Bété Cambodian Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Cuba Mmum Kasa Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French Futuna (East) Ga (Nkran Kasa) German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexico Mmum Kasa Mfantse Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Mmum Kasa Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tatar Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
1, 2. Nna Jehovah n’anyɛnkofo no mu bi nye woananom?
WOANA na ebɛfa no nyɛnko? Obi a epɛ n’asɛm, a enye no kɔ ba na hom beenu no nyina adwen hyia. Obi a ɔwɔ ayamuyie nye su ahorow a w’enyi gye ho.
2 Jehovah afa nyimpa binom dɛ n’anyɛnkofo. Dɛ nhwɛdo no, nna Abraham yɛ Jehovah n’anyɛnkofo no mu kor. (Isaiah 41:8; James 2:23) Afei so, nna Jehovah pɛ David n’asɛm. Ɔkãa dɛ, David yɛ ‘ɔbarimba a nankasa n’akoma da no ho.’ (Ndwuma 13:22) Na nkɔnhyɛnyi Daniel dze, nna Jehovah ‘dɔ no kɛse.’​—Daniel 9:23.
3. Ebɛnadze ntsi na Abraham, David nye Daniel bɛyɛɛ Jehovah n’anyɛnkofo?
3 Osii dɛn na Abraham, David nye Daniel bɛyɛɛ Jehovah n’anyɛnkofo? Jehovah kãa kyerɛɛ Abraham dɛ: “Etsie me ndze.” (Genesis 22:18) Hɔn a wofi ahobrɛadze mu yɛ setsie ma Jehovah no na ɔfa hɔn nyɛnko. Ɔman mu mpo botum abɛyɛ n’anyɛnkofo. Jehovah kyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ Israelman no dɛ: “Hom ntsie me ndze, na mebɛyɛ hom Nyankopɔn, na hom so ayɛ me man.” (Jeremiah 7:23) Ntsi sɛ epɛ ankasa dɛ ebɛyɛ Jehovah ne nyɛnko a, ɔsɛ dɛ eyɛ setsie ma no.
JEHOVAH BƆ N’ANYƐNKOFO HO BAN
4, 5. Ebɛn kwan do na Jehovah bɔ n’anyɛnkofo ho ban?
4 Bible no kã dɛ, Jehovah rohwehwɛ mbrɛ “ɔbɛkyerɛ no ho ne dzen wɔ hɔn a hɔn akoma dzi mu wɔ no ho no hɔn afamu.” (2 Mbermunsɛm 16:9) Jehovah bɔ n’anyɛnkofo anohoba wɔ Ndwom 32:8 no, dɛ: “Mebɛma esũa na makyerɛkyerɛ wo kwan a ɔsɛ dɛ efa do: m’enyi wɔ wo do dɛ mebɛpam wo.”
5 Ɔtamfo bi a no ho yɛ dzen pɛ dɛ osiw hɛn kwan dɛ yɛbɛyɛ Nyankopɔn n’anyɛnkofo. Naaso, Jehovah pɛ dɛ ɔbɔ hɛn ho ban. (Kenkan Ndwom 55:22.) Yefi hɛn akoma nyina mu som Jehovah dɛ n’anyɛnkofo. Wɔ tsebea a no mu yɛ dzen mu mpo no, yedzi nokwar ma no. Yɛwɔ ahotodo a nna ɔdwontofo no wɔ no bi. Ɔkãa Jehovah ho asɛm dɛ: “Osiandɛ ɔwɔ m’enyimfa ntsi, murunntutu.” (Ndwom 16:8; 63:8) Ebɛn kwan do na Satan bɔ mbɔdzen dɛ obesiw hɛn kwan dɛ yɛbɛyɛ Nyankopɔn n’anyɛnkofo?
SATAN BƆ NYIMPA SOMBO
6. Ebɛn sombo na Satan dze abɔ nyimpa?
6 Yesũae wɔ Tsir 11 no mu dɛ, Satan twaa Jehovah mpoa na ɔbɔɔ no sombo dɛ, ɔyɛ ɔtorfo nye osisifo, osiandɛ ɔamma Adam na Eve kwan ma hɔnankasa ennsi dza ɔyɛ papa nye dza ɔyɛ bɔn ho gyinae. Bio so, Bible mu nwoma Job ma yehu dɛ, Satan bɔ nyimpa a wɔpɛ dɛ wɔbɛyɛ Nyankopɔn n’anyɛnkofo no sombo. Satan pɛ akyerɛ dɛ, osian dza nyimpa botum enya efi Nyankopɔn hɔ ntsi na wɔsom no na ɔnnyɛ ɔdɔ a wɔwɔ ma No ntsi a. Ɔpɛ akyerɛ so dɛ, obotum ama nyimpa biara asoɛr etsia Nyankopɔn. Ma yɛnhwɛ dza yebotum esũa efi Job n’asɛm no nye mbrɛ Jehovah sii bɔɔ no ho ban no mu.
7, 8. (a) Nna woana nye Job? (b) Ebɛn asɛm na Satan kãa faa Job ho?
7 Nna woana nye Job? Ɔyɛ nyimpa pa bi a ɔtsenaa ase bɛyɛ mfrenhyia 3,600 a abɛsen kɔ mu. Jehovah kãa dɛ, dɛm aber no nna nyimpa biara nnyi asaase do a ɔtse dɛ ɔno. Nna Job wɔ obu kɛse ma Nyankopɔn. Afei so, nna okyir bɔn. (Job 1:8) Ampaara, nna Job yɛ Nyankopɔn ne nyɛnko mapa.
8 Satan twaa mpoa dɛ, dza Job nya fi Nyankopɔn hɔ ntsi na ɔsom no no. Satan kãa kyerɛɛ Jehovah dɛ: “Ana nnyɛ ɔwoara na abɔ ɔno, na ne fi, na dza ɔwɔ nyinara ho ban ehyia bi a? Ɔwo ehyira ne nsaano edwuma do, na n’ahodze adɔɔ sõ wɔ asaase no do. Na afei tsen wo nsa kã dza ɔwɔ nyinara, kyerɛ dɛ ɔnnkɔdom wo w’enyim.”​—Job 1:10, 11.
9. Ebɛnadze na Jehovah maa Satan kwan dɛ ɔnyɛ?
9 Satan bɔɔ Job sombo dɛ, dza obotum enya efi Jehovah hɔ nye adze tsitsir ntsi a nna ɔsom No no. Bio so, nna Satan repɛ akyerɛ dɛ obotum ama Job egyaa dɛ ɔbɔsom Jehovah. Ɔwɔ mu dɛ Jehovah anngye dza Satan kãe no annto mu dze, naaso Ɔmaa no kwan dɛ ɔnsɔ Job nhwɛ dɛ, anyanyanbiara ɔdɔ a nna ɔwɔ ma no ntsi na ɔsom No anaa.
SATAN TOWEE HYƐƐ JOB DO
10. Ebɛn kwan do na Satan towee hyɛɛ Job do, na Job yɛɛ n’adze dɛn?
10 Odzi kan, Satan sɛɛ Job no mbowa a ɔwɔ nyinara. Afei, Satan kum Job no nkowaa no mu dodowara. Job hweer dza ɔwɔ nyinara. Ewiei koraa no, Satan dze mframa kɛse kum Job ne mba du no. Naaso, Job kɔr do dzii nokwar maa Jehovah. “Iyi nyinara mu no Job annyɛ bɔn, na so oemmbu nkwaseadze amma Nyame.”​—Job 1:12-19, 22.
Jehovah tuaa Job kaw wɔ no nokwardzi ho
11. (a) Ebɛnadze bio na Satan dze yɛɛ Job? (b) Naaso, Job yɛɛ n’adze dɛn?
11 Satan ammpa abaw. Ɔkãa asɛm yi dze twaa Nyankopɔn mpoa dɛ: “Tsen wo nsa, na kã ne biew na no honam, kyerɛ dɛ ɔnnkɔdom wo wɔ w’enyim.” Ntsi Satan dze yarba bi a ɔyɛ yaw paa bɔɔ Job. (Job 2:5, 7) Naaso, Job kɔr do dzii nokwar maa Jehovah. Ɔkãa dɛ: “Mirinnyi m’emudzi mmfi moho araa ma ekodu dɛ mubowu.”​—Job 27:5.
12. Ebɛn kwan do na Job maa ɔdaa edzi dɛ Satan yɛ ɔtorfo?
12 Sombo a Satan bɔe anaa siantsir a nna Job ruhu amandze no, nna Job nnyim ho hwee. Nna osusu dɛ, Jehovah na ɔdze amandzehu pii no aba no do. (Job 6:4; 16:11-14) Naaso, wɔ yinom nyina mu mpo no, Job kɔr do dzii nokwar maa Jehovah. Afei dze, ekyingye biara nnyi ho dɛ, nna Job nnyɛ pɛsɛankonya. Osian ɔdɔ a nna ɔwɔ ma Nyankopɔn ntsi na ɔyɛ Ne nyɛnko no. Iyi maa Satan no sombo a ɔbɔe nyina yɛɛ ator nkotsee!
13. Ebɛnadze na ofii Job no nokwardzi no mu bae?
13 Ɔwɔ mu dɛ nna Job nnyim dza ɔrokɔ do wɔ sor dze, naaso odzii nokwar maa Nyankopɔn na ɔmaa ɔdaa edzi dɛ Satan yɛ owudzifo. Jehovah tuaa Job kaw wɔ no nokwardzi no ho.​—Job 42:12-17.
SATAN ABƆ WO SOMBO
14, 15. Ebɛn sombo na Satan dze abɔ nyimpa nyina?
14 Ibotum enya esuadze ahorow a ohia efi dza ɔtoo Job no mu. Ndɛ so, Satan bɔ hɛn sombo dɛ dza yebotum enya efi Jehovah hɔ ntsi na yɛsom No no. Satan kãe wɔ Job 2:4 dɛ: “Dza nyimpa wɔ nyinara ɔdze ma per no nkwa.” Ntsi, ɔnnyɛ Job nkotsee na Satan bɔɔ no sombo, na mbom ɔbɔɔ nyimpa nyina sombo dɛ wɔyɛ pɛsɛankonya. Wɔ mfrenhyia ɔhaha pii ekyir a Job wui no, nna Satan da ho ara twa Jehovah nye no nkowaa mpoa. Dɛ nhwɛdo no, yɛkenkan wɔ Mbɛbusɛm 27:11 dɛ: “Me ba, hu nyansa, ma m’akoma ntɔ me yamu, ama meenya bi mebua nyia ɔhyɛ me ahorohoraa no.”
15 Ibotum ama Satan ayɛ ɔtorfo dze nam gyinae a ibesi dɛ ebɛyɛ setsie ama Jehovah na eedzi nokwar ama no dɛ Ne nyɛnko no do. Sɛ ɔsɛ dɛ eyɛ nsesã ahorow bi a no mu yɛ dur wɔ w’asetsena mu mpo a, ɔyɛ gyinae a oye paa a ibotum esi! Dɛm gyinaesi yi yɛ enyibersɛm. Satan abɔ wo sombo dɛ, sɛ ihyia nsɛndzendzen wɔ w’asetsena mu a, ɔnnyɛ adze a ibedzi nokwar ama Nyankopɔn. Ɔbɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛdaadaa hɛn, mbrɛ ɔbɛyɛ a yerinndzi nokwar mma Nyankopɔn. Osi dɛn yɛ dɛm?
16. (a) Ebɛn kwan ahorow na Satan fa do bɔ mbɔdzen dɛ obesiw hɛn kwan dɛ yɛbɔsom Jehovah? (b) Ebɛn mbɔdzen na Abɔnsam botum abɔ dze esiw wo kwan dɛ ebɔsom Jehovah?
16 Satan fa akwan ahorow pii do bɔ mbɔdzen dɛ obesiw hɛn kwan dɛ yɛbɛyɛ Nyankopɔn n’anyɛnkofo. Ɔtow hyɛ nyimpa do “tse dɛ gyata a ɔropɔw nenam rohwehwɛ nyia obenya no amen no.” (1 Peter 5:8) Sɛ w’anyɛnkofo, w’ebusuafo anaa nyimpa afofor bɔ mbɔdzen dɛ wobesiw wo kwan dɛ ibosũa Bible no na ayɛ dza ɔtsen a, mma iyi nnyɛ wo nwanwa. Ibia ebɛtse nkã dɛ wɔrotow ahyɛ wo do. * (John 15:19, 20) Satan tum yɛ noho tse dɛ “kan ɔbɔfo.” Ntsi, otum bɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛdaadaa hɛn ma yaayɛ Jehovah do asoɔdzen. (2 Corinthfo 11:14) Satan ma yenya adwen dɛ, yerunntum nnsɔ Nyankopɔn enyi ara da. Iyi so yɛ kwan fofor a ɔfa do bɔ mbɔdzen dɛ obesiw hɛn kwan dɛ yɛbɔsom Jehovah.​—Mbɛbusɛm 24:10.
DZI JEHOVAH N’AHYƐDZE DO
17. Ebɛnadze ntsi na yɛyɛ setsie ma Jehovah?
17 Sɛ yɛyɛ setsie ma Jehovah a, yɛda no edzi dɛ Satan yɛ ɔtorfo. Ebɛnadze na ɔbɔboa hɛn ma yaayɛ setsie? Bible no yi ano dɛ: “Fa w’akoma nyinara, na ɔnye wo kra nyinara na ɔnye w’ahoɔdzen nyinara dɔ Ewuradze wo Nyankopɔn.” (Deuteronomy 6:5) Yɛyɛ setsie ma Jehovah osian ɔdɔ a yɛwɔ ma no ntsi. Ber a ɔdɔ a yɛwɔ ma Jehovah no kɔ do yɛ kɛse no, yɛbɛpɛ dɛ yɛyɛ biribiara a ɔkã kyerɛ hɛn dɛ yɛnyɛ no. Ɔsomafo John kyerɛɛw dɛ: “Na Nyankopɔn dɔ nye yi, dɛ yebedzi n’ahyɛdze do: na n’ahyɛdze no nnyɛ dzen.”​—1 John 5:3.
18, 19. (a) Ndzeyɛɛ a Jehovah kã kyerɛ hɛn dɛ omuo no bi nye dza ɔwɔ hen? (b) Yesi dɛn hu dɛ, Jehovah nnhwehwɛ dza yerunntum nnyɛ mmfi hɛn hɔ?
18 Naaso, ndzeyɛɛ a Jehovah kã kyerɛ hɛn dɛ omuo no bi nye dza ɔwɔ hen? Wɔakã bi ho asɛm wɔ adakaba a wɔato dzin “ Kyir Ndzeyɛɛ a Jehovah Kyir” no mu. Ahyɛse no, ibia ibosusu dɛ dɛm ndzeyɛɛ ahorow yi mu bi nnyɛ bɔn a enyiber wɔ mu. Naaso, sɛ ekenkan Kyerɛwnsɛm a wɔatwe adwen esi do no na isusu ho yie a, ebɛtse siantsir a nyansa wɔ mu dɛ yebedzi Jehovah ne mbra do no ase. Ibia ebɛtse nkã dɛ ɔsɛ dɛ eyɛ nsesã ahorow bi wɔ w’asetsena mu. Ɔwɔ mu dɛ ɔtɔfabi a ɔbɛyɛ dzen ama wo dɛ ebɛyɛ nsesã dze, naaso sɛ itum yɛ a, ibenya asomdwee na enyigye a Nyankopɔn ne nyɛnko a odzi nokwar no nya no bi. (Isaiah 48:17, 18) Yesi dɛn hu dɛ obotum ayɛ yie dɛ yɛbɛyɛ nsesã ahorow a ɔtse dɛm?
19 Jehovah nnhwehwɛ dza yerunntum nnyɛ mmfi hɛn hɔ da. (Deuteronomy 30:11-14) Dɛ hɛn Nyɛnko pa no, onyim hɛn yie sen mbrɛ hɛnankasa yesi nyim hɛnho. Onyim dza yebotum ayɛ nye dza yerunntum nnyɛ. (Ndwom 103:14) Ɔsomafo Paul hyɛ hɛn nkuran dɛ: “Nyankopɔn yɛ ɔnokwafo a ɔremma wɔnnsɔ hom nnhwɛ nnkyɛn dza hom botum, na mbom ɔdze ɔkwan bɛka nsɔhwɛ no ho a wɔnam mu fi nsa, ma hom eetum asɔw.” (1 Corinthfo 10:13) Yebotum enya ahotodo dɛ, Jehovah bɛma hɛn ahoɔdzen ma yɛdze aayɛ dza ɔtsen ber nyina. Ɔbɛma wo “tum no ne kɛseyɛ a ɔtra do” a ɔbɔboa wo ma eegyina tsebea ahorow a no mu yɛ dzen ano. (2 Corinthfo 4:7) Paul nyaa Jehovah no mboa wɔ mber a ɔtse dɛm mu. Iyi ekyir no, nna obotum akã dɛ: “Mutum adze nyina yɛ wɔ nyia ɔhyɛ me dzen no mu.”​—Philippifo 4:13.
MA W’ENYI NGYE DZA NYANKOPƆN ENYI GYE HO HO
20. Ebɛn suban na ɔsɛ dɛ isuasua, na ebɛnadze ntsi a?
20 Sɛ yɛpɛ dɛ yɛyɛ Jehovah n’anyɛnkofo a, dza Jehovah akã dɛ omuo no, ɔsɛ dɛ yegyaa yɛ. Naaso, ɔsɛ dɛ yɛyɛ pii sen dɛm. (Romefo 12:9) Biribiara a Nyankopɔn enyi gye ho no, n’anyɛnkofo so enyi gye ho. Wɔakã dɛm ndzɛmba yi ho asɛm wɔ Ndwom 15:1-5. (Kenkan.) Jehovah n’anyɛnkofo suasua no suban na wɔda “ɔdɔ, dɛw, asomdwee, penkyɛr, ayamuyie, papayɛ, gyedzi, ɔdwe, [nye] ahohyɛdo” edzi.​—Galatiafo 5:22, 23.
21. Ibesi dɛn ada suban ahorow a Nyankopɔn enyi gye ho no edzi?
21 Ibesi dɛn ada dɛm suban ahorow no edzi? Ɔsɛ dɛ isũa ndzɛmba a Jehovah n’enyi gye ho dze nam Bible a ebɛkenkan na esũa daa no do. (Isaiah 30:20, 21) Ber a ekɔ do yɛ dɛm no, ɔdɔ a ewɔ ma Jehovah no bɛyɛ kɛse. Afei, ber a ɔdɔ a ewɔ ma Jehovah no kɔ dɔ yɛ kɛse no, ebɛpɛ dɛ eyɛ setsie ma no.
22. Sɛ eyɛ setsie ma Jehovah a, ebɛn mfaso na obefi mu aba?
22 Yebotum dze nsesã ahorow a ohia dɛ eyɛ no atoto atar dadaw a ɔhyɛ wo a ibeyi egu hɔ na afa fofor ahyɛ no ho. Bible no kã dɛ, ɔsɛ dɛ iyi “nyimpa dadaw no” gu hɔ na ehyɛ “nyimpa fofor” no. (Colossaefo 3:9, 10) Ɔwɔ mu dɛ ne yɛ nnkɛyɛ mberɛw dze, naaso sɛ yɛyɛ nsesã ahorow a ɔtse dɛm na yɛyɛ setsie ma Jehovah a, ɔbɔ hɛn anohoba dɛ, ɔbɛma hɛn “akatua kɛse” bi. (Ndwom 19:11) Ntsi, si gyinae dɛ ebɛyɛ setsie ama Jehovah na da no edzi dɛ Satan yɛ ɔtorfo. Ma ɔdɔ a ewɔ ma Jehovah no nyɛ siantsir a esom no, na nnyɛ akatua bi a ibenya daakye ntsi. Iyi bɛma abɛyɛ ne nyɛnko mapa!
^ nky. 16 Iyi nnkyerɛ dɛ Satan na opĩapĩa hɔn a wɔbɔ mbɔdzen dɛ wobesiw wo kwan dɛ ibosũa Bible no. Naaso, Satan nye “wiadze yi nyame” no, na “wiadze nyina da [no tum] mu.” Ntsi, ɔnnyɛ nwanwa ber a nyimpa binom bɔ mbɔdzen dɛ wobesiw hɛn kwan dɛ yɛbɔsom Jehovah no.​—2 Corinthfo 4:4; 1 John 5:19.
KYIR NDZEYƐƐ A JEHOVAH KYIR
Leviticus 20:10, 13, 15, 16; Romefo 1:24, 26, 27, 32; 1 Corinthfo 6:9, 10
Deuteronomy 18:9-13; 1 Corinthfo 10:21, 22; Galatiafo 5:20, 21
1 Corinthfo 10:14
1 Corinthfo 5:11
Leviticus 6:2, 4; Ephesusfo 4:28
Mbɛbusɛm 6:16, 19; Colossaefo 3:9; Nyikyerɛ 22:15
Ndwom 11:5; Mbɛbusɛm 22:24, 25; Malachi 2:16; Galatiafo 5:20, 21
Kasafĩ nye nkɔnkɔnsa
Leviticus 19:16; Ephesusfo 5:4; Colossaefo 3:8
Bɔgya a edze bedzi dwuma wɔ ɔkwan bɔn do
Genesis 9:4; Ndwuma 15:20, 28, 29
W’ebusua a eronnhwɛ hɔn
Akodzi nye amanyɛsɛm a edze woho bɛhyɛ mu
Towa, wii nye ndubɔn a ebɔnom
Mark 15:23; 2 Corinthfo 7:1
NOKWASƐM 1: JEHOVAH N’ANYƐNKOFO YƐ SETSIE MA NO
“Hom ntsie me ndze, na mebɛyɛ hom Nyankopɔn, na hom so ayɛ me man.”​—Jeremiah 7:23
Aso yebotum abɛyɛ Nyankopɔn n’anyɛnkofo?
Osiandɛ Abraham tsiee Nyankopɔn na onyaa No mu gyedzi ntsi, ɔbɛyɛɛ Jehovah ne nyɛnko.
2 Mbermunsɛm 16:9
Jehovah bɔboa hɔn a wɔyɛ setsie no.
Ndwom 25:14; 32:8
Jehovah ma n’anyɛnkofo nya nhumu.
Jehovah bɛtaa n’anyɛnkofo ekyir.
NOKWASƐM 2: NNA JOB YƐ NYANKOPƆN NE NYƐNKO NA ƆKƆR DO DZII NOKWAR
“Iyi nyinara mu no Job annyɛ bɔn, na so oemmbu nkwaseadze amma Nyame.”​​—Job 1:22
Ebɛn kwan do na Satan towee hyɛɛ Job do, na Job yɛɛ n’adze dɛn?
Satan bɔɔ Job sombo dɛ, dza onya fi Nyankopɔn hɔ ntsi na ɔsom No no na nnyɛ ɔdɔ a ɔwɔ ma no bi a.
Jehovah maa Satan kwan ma ɔsɛɛ Job n’ahodze nyina na ɔdze yarba bi a ɔyɛ yaw mpo bɔɔ no.
Nna Job nnyim siantsir a oruhu amandze dɛm, naaso ɔkɔr do dzii nokwar maa Jehovah.
NOKWASƐM 3: SATAN BƆ MBƆDZEN DƐ ƆBƆTWE WO EFI JEHOVAH HO
“Dza nyimpa wɔ nyinara ɔdze ma per no nkwa.”​—Job 2:4
Ebɛn kwan do na Satan bɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛsɛɛ yɛnye Jehovah ntamu anyɛnkofa no?
2 Corinthfo 11:14
Satan bɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛdaadaa hɛn ma yaayɛ Jehovah do asoɔdzen.
Ɔbɔ mbɔdzen dɛ ɔbɛma yɛatse nkã dɛ, yerunntum nnsɔ Jehovah n’enyi ara da.
Satan dze ɔtaa ba hɛn do.
Si gyinae dɛ ebɛyɛ setsie ama Jehovah na aayɛ ne nyɛnko mapa. Iyi bɛma ɔada edzi dɛ Satan yɛ ɔtorfo.
NOKWASƐM 4: YƐYƐ SETSIE MA JEHOVAH OSIANDƐ YƐDƆ NO
“Na Nyankopɔn dɔ nye yi, dɛ yebedzi n’ahyɛdze do: na n’ahyɛdze no nnyɛ dzen.”​—1 John 5:3
Ibesi dɛn abɛyɛ Jehovah ne nyɛnko?
Dɔ Nyankopɔn. Iyi bɔboa wo ma aayɛ setsie ama no.
Yɛ setsie ma Jehovah, na ibenya do mfaso daa.
Nya awerɛhyɛmu dɛ, Jehovah ronnhwehwɛ dza irunntum nnyɛ mmfi wo hɔ da.
Yɛ dza ɔtsen, na Jehovah bɛma wo ahoɔdzen a ihia no.